काग तिहारको दिन १०० वर्ष पछि जुर्यो महासंयोग ! राशि अनुसार के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने? « Janata Times
काग तिहारको दिन १०० वर्ष पछि जुर्यो महासंयोग ! राशि अनुसार के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?
काठमाडौँ, कात्तिक ८ पंञ्चाङ्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका अथवा काग तिहारका दिन धनवन्तरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरस मनाउने गरिन्छ ।
धन त्रयोदशी र धनतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ ।
आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि र धनका देवता कुबेरको जन्मोत्सव मनाउने पर्व हो । धनतेरसका दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा नयाँ९नयाँ भाँडाकुडा र सुनचाँदीका गरगहना किनमेल गर्ने परम्परा रही आएको छ । धनतेरस पछिल्लो समय तराईमा मात्र सिमीत नभई पहाडी क्षेत्रमा समेत मनाउन थालिएको छ।